﻿Komputermen पृष्ठ 1
स्थापना कार्यालय 2013
म यस्तो लेखे, Microsoft Office प्रोग्राम को नयाँ संस्करण कार्यालय 2013 बिक्री गयो। यदि मेरो पाठकहरूलाई केही नयाँ कार्यालय प्रयास गर्न इच्छुक हुनेछ, तर यसको लागि भुक्तानी गर्न ठूलो इच्छा छैन म छक्क छैन। रूपमा अघि, म धार वा unlicensed सफ्टवेयर अन्य स्रोतहरू प्रयोग गरेर सुझाव दिन्छौं छैन। त्यसैले, यस लेखमा म बिल्कुल कानुनी रूपमा आफ्नो कम्प्युटर नयाँ माईक्रोसफ्ट अफिस 2013 मा स्थापना कसरी वर्णन गर्नेछ - एक महिनाको लागि वा दुई महिनाको लागि (र दोस्रो विकल्प थप निःशुल्क छ) । पहिलो विधि - कार्यालयमा एक निःशुल्क सदस्यता 365 यस भन्दा स्पष्ट बाटो (तर दोस्रो विकल्प, मेरो विचारमा, तल वर्णन रूपमा, धेरै राम्रो) छ - गर्नुपर्छ माइक्रोसफ्ट वेबसाइट जाने, पहिलो कुरा हामी देख्न - यो विस्तारित घर लागि कार्यालय 365 प्रयास गर्न एक प्रस्ताव। यसलाई म यस विषय मा अघिल्लो लेखमा लेखे के बारेमा थप जान्न। वास्तवमा, यो नै माईक्रोसफ्ट अफिस 2013 छ, तर मासिक सदस्यता शुल्क को आधारमा वितरण। र पहिलो महिना मा यो अपेक्षाकृत निःशुल्क छ। स्थापना गर्न कार्यालय 365 घर फ्री एक महिनाको लागि म्याद थप, तपाईं आफ्नो खाता, विन्डोज लाइभ आईडी लग इन गर्न आवश्यक हुनेछ। तपाईं पहिले नै एउटा छ भने, तपाईं यसलाई सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ। तपाईं पहिले नै SkyDrive र Windows 8, तपाईं पहिले नै प्रत्यक्ष आईडी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने - बस नै लगिन जानकारी प्रयोग । नयाँ कार्यालय सदस्यता तपाईं Microsoft खातामा लग इन गरेपछि एक महिनाको लागि निःशुल्क कार्यालय 365 प्रयास गर्न आग्रह गरिने छ। एकै समयमा, एक सुरु तपाईंको क्रेडिट कार्ड भिषा वा मास्टर कार्ड मा नै डेटा प्रविष्ट हुनेछ लागि, त्यसपछि 30 rubles हटाइनेछ त्यहाँबाट (प्रमाणिकरण लागि)। र मात्र पछि तपाईं आवश्यक स्थापना फाइलहरू डाउनलोड सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। स्थापना को डाउनलोड फाइल सुरु गरेपछि प्रक्रिया प्रयोगकर्ता बिल्कुल कुनै कार्य आवश्यक छैन - घटकहरुलाई इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरिएका छन्, र स्क्रिनको तल्लो दायाँ कुनामा जानकारी विन्डो प्रतिशत रूपमा स्थापना प्रगति देखाउँछ। डेस्कटप कम्प्युटर 365.
साइन अप निमन्त्रणानगरिएकोजडान VKontakte अब असम्भव
प्रयोगकर्ताहरूको एक सानो संख्या पहिले नै नयाँ सदस्यहरु आमन्त्रण गर्न सही प्राप्त गरेको छ;
क्रेडिट बजार WaspAce
तपाईं एक साइट छैन र तपाईं WaspAce वा सेवा तपाईं यो सेवा को मद्दतले आफ्नो साइट बढाउन आवश्यक मार्फत कमाउन। त्यसपछि, दुवै अवस्थामा, आवश्यक विनिमय WaspAce ऋण। शुरुआती लागि, विनिमय फाइदा लिन कसरी प्रश्न छ। केही जटिल। यो के गर्न तपाईं क्रेडिट विनिमय WaspAce जाने र हुनुपर्छ सेवा गर्न आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड प्रविष्ट गरेर एउटा खाता सिर्जना गर्नुहोस्। उत्पादक कार्ड र तपाईं मूल्यवर्ग लागि प्राप्त गर्न चाहेको रकम को नाममात्र मूल्य बताउँदै यस "मानचित्र उत्पन्न" बटन क्लिक गर्नुहोस् र एक फारम भर्न। यो सेवा कार्ड अंकित मूल्य को 10% चार्ज गरिने उल्लेख गर्नुपर्छ। यो रकम यसो ती बाट कम्तिमा 10% थप क्रेडिट हुनुपर्छ भन्ने निम्नानुसार। सेवा गर्न दर्ता समयमा प्रदान ई-मेल मा, सक्रियता कोड कार्ड पठाइने। यो कोड कार्ड को सक्रियता पछि आफ्नो खातामा अंकित मूल्य प्राप्त हुनेछ जो, खरीदार हस्तान्तरण गरिएको छ। क्रेता सुझाव हेर्न र Boden, जानकारी लिइएको हो जो प्रयोगकर्ता, मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं ICQ मा एउटा सन्देश पठाउन वा क्लिक ई-मेल मा "सन्देश पठाउनुहोस्" गर्न सक्नुहुन्छ। को बसोबास गरेपछि, विक्रेता खरीदार एक सक्रियता कोड खरीदार एक फारम क्षेत्र मा प्रवेश गर्ने पठाउँछ तपाईं क्लिक गर्दा "कार्ड सक्रिय"। कारोबार गरेपछि विक्रेता/खरीदार ट्याब "लेनदेन" गर्न जान सक्नुहुन्छ र तल अनुमान राख्नु:विक्रेता र विपरित गर्न खरीदार (प्रेस 1)। एकै समयमा, विक्रेता/खरीदार दर्जा को दर्जा गर्न लेनदेन को नाममात्र मूल्य को मात्रा मा थप गरिने छ।
लक खाता "स्कूलका साथीहरू & quot
शुभ। केही दिन पहिले म साइट "Odnoclasssniki" गर्न जान सकेन भनेर फेला परेन। म मेरो लगिन र पासवर्ड, खोल्न मेरो पृष्ठ, र त्यसपछि पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस्:"तपाईंको पृष्ठ हैकिंग को शङ्काको मा निलम्बित छ। हाम्रो सुरक्षा प्रणाली आफ्नो खाताबाट स्पाम सन्देश को आम-पत्राचार पहिचान गरेको छ, र हामी अस्थायी रूपमा यसलाई निलम्बन गर्न बाध्य भए। आफ्नो खातामा पहुँच पुनर्स्थापना गर्न, तपाईं एक मोबाइल फोन मार्फत मान्य गर्न आवश्यक "। त्यसपछि, म यो फारममा प्रविष्ट पछि मेरो नम्बर, तपाईं आफ्नो फोन, र म एक सक्रियता कोड प्राप्त पुष्टि पछि आफ्नो खाता को सक्रियता पुष्टि गर्न आवश्यकता संग एसएमएस प्राप्त हुनेछ निम्न सन्देश प्राप्त। म हाँ छोटो नम्बर 4016.
किन हराउनु जाने गर्दा आफ्नो कम्प्युटरमा
प्रश्न, किन हराउनु जाने छ, जबकि कम्प्युटरमा, वास्तवमा थप गम्भीर भन्दा यो पहिलो नजर मा देखिन्छ मा। निस्सन्देह, तपाईंले राख्न सक्नुहुन्छ समय ट्रयाक, र अन्य उपकरणहरूको, तर प्रणाली घडी अर्को महत्त्वपूर्ण समारोह, धेरै प्रयोगकर्ताहरू सचेत छैनन् जो छ। एक राम्ररी सेट समय र मिति कन्फिगर स्टप स्वतः, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर अद्यावधिक "ढिलाइ" ब्राउजर र अन्य उपयोगी कार्यक्रम सुरु गर्न सिस्टम काम बिना। यो कसरी निरन्तर straying छ भने, कम्प्युटरमा समय सेट गर्न जान्न त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। लिथियम ब्याट्री समस्याहरू तपाईं Motherboard आफैलाई जडान गर्न प्रयास गरेका छन् भने, तपाईँले यसलाई एउटा सानो राउन्ड ब्याट्री विशेष स्लट मा देख्यो हुनुपर्छ। सामान्यतया यो के तपाईं आफ्नो मूल अवस्थामा यसको सेटिङ रिसेट, को BIOS कन्फिगर गर्न आवश्यक गर्दा प्रयोग गरिन्छ। यो प्रक्रिया अक्सर एक Windows प्रशासक पासवर्ड यो BIOS मार्फत स्थापना गरिएको थियो भने, यदि आवश्यक, हटाउन प्रयोग गरिन्छ। ब्याट्री, र अन्य मिशन मा - ठीक किनभने तपाईंको कम्प्युटर बन्द हुँदा पनि, समय को स्थिर खण्डमा र मिति परिवर्तन यसलाई समर्थित छ। ब्याट्रि बस्छन भने, त्यसपछि सबै सेटिङ बन्द तपाईं आफ्नो कम्प्युटर बन्द हरेक समय प्राप्त। अन्य संकेत गर्दै छन्: यस्तो "CMOS चेकसम त्रुटि" तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर सुरु हुँदा inscriptions को उद्भव। booting जारी F1 वा F2 थिच्नुहोस् गर्न अनुरोध को उपस्थिति। केही साइटहरु प्रमाणपत्र समाप्त भएको छ कि एक सन्देश काम छैन। एन्टी-भाइरस सफ्टवेयर अब अद्यावधिक वा कुनै काम गरिएको छ। शुल्क र लिथियम ब्याट्री हुन सक्दैन:त्यो बसे भने, तपाईँले एउटा नयाँ ब्याट्री खरिद र शक्ति आपूर्ति प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक । प्रतिस्थापन ब्याट्री तपाईं समस्या बिना ह्यान्डल गर्न सक्ने प्रणाली एकाइ आफैलाई जडान गर्न, र ब्याट्री को प्रतिस्थापन संग सके भने: पूर्ण कम्प्युटर जडान विच्छेद गर्नुहोस्, यो पर्खाल आउटलेट देखि चलान र बिजुली आपूर्ति केबल देखि सिस्टम जडान विच्छेद गर्नुहोस्। प्रणाली एकाइ को मामला खोल्न छेउमा पर्खाल फिक्सिंग को स्क्रू हटाउनुहोस्। एक पेचकस वा चक्कु संग एउटा सानो वसन्त थिचेर, को Motherboard मा ब्याट्री पत्ता र यसलाई हटाउन। कहिलेकाहीँ ब्याट्री जस्तै ग्राफिक्स कार्ड अन्तर्गत लुकाउने रूपमा अन्य उपकरणहरू अन्तर्गत छ। नयाँ ब्याट्री छान्नुहोस् र बिस्तारै ठाउँमा यसलाई संलग्न। उचित स्थापना ब्याट्री सुरक्षित निश्चित छ कि संकेत, एक कम क्लिक मा समाप्त हुन्छ। सिस्टम आवरण राख्नुहोस् र कम्प्युटर अन। स्थापना पछि, ब्याट्री जाँच गर्नुहोस्। समय र मिति सेट, र त्यसपछि फेरि कम्प्युटर बन्द, यो पूर्ण de-energized। त्यसपछि, मिसिन मा बारी र बनाउन सेटिङ अब हो स्लिप निश्चित गर्नुहोस्। समय क्षेत्र निर्धारण समस्या केही घण्टा समय lags (वा चालु), र मिति सही छ भने, त्यसपछि समस्या शायद छैन लिथियम ब्याट्री छ, र सञ्चालन प्रणाली सेटिङहरू। सामान्यतया यस्तो समस्या इन्टरनेटको स्वचालित समिकरण र ठीक वर्तमान समय क्षेत्र उजागर गर्न को लागि समावेश सम्बन्धित। गर्दा धेरै देशहरूमा त्यसो गर्न जारी रूस, गर्मी/जाडो समयको लागि घडी रोकियो मा। फलस्वरूप, स्वचालित समिकरण घडी अगाडि वा पछाडि घडी मा "झूट" सुरु हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम र घन्टा समय माइक्रोसफ्ट सेवाहरूको अनुवाद निर्भर छैन, तपाईंले एउटा सानो समायोजन आफ्नै सिस्टम कन्फिगरेसन बनाउन आवश्यक: तल दायाँ कुनामा घडी मा बायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस्। "सेटिङहरू परिवर्तन" क्लिक गर्नुहोस्। "मिति र समय परिवर्तन" क्लिक गर्नुहोस् र सही मान सेट। "ठीक छ" क्लिक गरेर तपाईंको परिवर्तन बचत गर्न नबिर्सनुहोला। "समय क्षेत्र परिवर्तन" र आफ्नो निवासको क्षेत्र चयन क्लिक गर्नुहोस्। मा "इन्टरनेटमा समय" क्लिक गर्नुहोस् र "परिवर्तन सेटिङ" क्लिक गर्नुहोस्। "समय सिंक्रोनाइज गर्नुहोस्" हटाएर कन्फिगरेसन बचत गर्न "ठीक" क्लिक गर्नुहोस्। अब लिथियम ब्याट्री सम्म तल बस्न हुनेछ, प्रणाली समय र मिति तपाईं आफैलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। अन्य कारणहरू तपाईंलाई थाहा रूपमा, समय किन निरन्तर छ भन्दा साधारण कारण हराएका - एक भाँचिएको ब्याट्री। दोस्रो सर्वाधिक लोकप्रिय अवस्था - गलत समय क्षेत्र सेटिङ र समिकरण। तर, कहिलेकाहीं प्रयोगकर्ता अन्य समस्या, समय को गलत प्रदर्शन पैदा सामना: भुक्तानी कार्यक्रम को लागि एक परीक्षण अवधि डिस्चार्ज विशेष उपकरण प्रयोग। यो प्रणाली त्रुटिहरू धेरै गराउँछ किनभने यस्तो सफ्टवेयर देखि, त्यागेर गर्नुपर्छ। आफ्नो कम्प्युटर संक्रमित भाइरस। केही खराब अनुप्रयोगहरूले Windows मा मिति र समय निर्धारण को समारोह असर गर्छ। भने सबै अरू असफल भएमा, भाइरस लागि आफ्नो सिस्टम जाँच गर्न निश्चित हुन। यो कम्प्युटर "संक्रमण" उठाउनु भएको छ, तर प्रणाली असफल किनभने राम्ररी काम गर्न संभावना छ। एन्टिभाइरस र उपचार उपयोगिता डा संग आफ्नो Windows स्क्यान वेब क्योरइट, फेला पार्न र सबै भाइरस नष्ट गर्न। समय समय समयमा रिसेट छ अर्को अप्रिय अवस्था - फ्याँकिएको भइरहेको छैन स्थिर छ, तर केवल intermittently। त्यहाँ अन्य विकल्प हुन सक्छ: समय चालू गर्दा रिसेट छ, तर मिति सही छ। स्थिर वाच जब तपाईं बन्द कम्प्युटर बारी र त्यसपछि अर्को समय जान सुरु गर्नुहोस्। आफ्नै परिवर्तन को तिथि। यस व्यवहार को सबै भन्दा साधारण कारण छ जो गाउँमा छैन नै ब्याट्री, हुन्छ, तर यो एक "आधा मरेर" अवस्थामा छ। तर, अन्य पक्षलाई दृष्टि गुमाउन हुँदैन:भाइरसका लागि आफ्नो कम्प्युटर चेक, सफ्टवेयर-activators तिनीहरूले स्थिर टाउको दुखाइ बन्न अघि यी दोहोरिने मुद्दाहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो कम्प्युटर पुरानो छ र तपाईं सम्भवत त्यसपछि ब्याट्री, परिवर्तन कहिल्यै भने, यो ब्याट्री को लागत जेब हान्न असम्भाव्य छ बाहेक, यो के गर्न समय छ।
लिंक प्यानल फोल्डरहरू | विन्डोज को विश्वकोश
यसअघि हामी कसरी लिङ्क पट्टी एक लिंक थप्न बारेमा कुरा। र तपाईंले कसरी एउटा फोल्डर थप्न सक्नुहुन्छ?
हेवलेट-पैकार्ड $ 1.2 अर्ब
न्यूयोर्क टाइम्स घोषणा मा प्रकाशित डाटा अनुसार, पाम हिमाचल प्रदेश को एक सहायक हुनेछ। यो गम्भीर हिमाचल प्रदेश को स्मार्टफोन बजार मा ट्याब्लेट पीसी को बजार मा संभवतः पनि प्रचार गर्नुपर्छ र। यो बारेमा पाम अब अधिग्रहण योजना मा एक धेरै मनमोहक लक्ष्य छ कि केहि विश्लेषकहरूले पहिले नै कुरा भइरहेका टिप्पण लायक छ। यो दृश्य कारण WebOS सिस्टम सञ्चालन, बजार मा अपेक्षाकृत सुस्त स्वागत प्राप्त गरेको छ जो संग पाम पूर्व स्मार्टफोन थियो। अर्कोतर्फ, हिमाचल प्रदेश पनि पनि धेरै सफलता प्राप्त गरे जो विन्डोज मोबाइल, साथ धेरै समय smarftonov iPaq उत्पादन गर्छ। पाम सम्झौता एक Lifesaver छ लागि, यो अझै पनि छैन स्पष्ट कम्पनी सक्छन् थप प्रतिस्पर्धी कुरा मा आफ्नो कम लोकप्रिय स्मार्टफोन को एक जोडी बदल गर्न चाहे छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। पनि गर्न सक्छन् कम्पनी गुगल एन्ड्रोइड सञ्चालन प्रणाली, जो बजार मा लोकप्रियता प्राप्त छ संग विशेष मा, एप्पल आईफोन र अन्य फोन को लागि प्रतिस्पर्धा कि स्पष्ट छैन। अर्कोतर्फ, एचपी, यो देखिन्छ, विकास र WebOS लगानी गर्न जारी हुनेछ। यसबाहेक, सञ्चालन प्रणाली स्मार्टफोन लागि, तर पनि ठूलो उपकरणहरू लागि मात्र होइन डिजाइन गरिनेछ। हुनत WebOS संग उत्पादनहरु को आधिकारिक निकट भविष्यमा घोषणाहरू foreseen छ। आईडीसी अनुसार, अब पाम स्मार्टफोन संयुक्त राज्य अमेरिका खातामा सबै स्मार्टफोन मात्र 5% लागि बिक्री गरिएको छ। साथै, पाम अपेक्षाकृत लामो स्मार्टफोन आफ्नो बिक्री बढाउन लागि आवेदन महत्त्व बुझे। त्यसैले अब पाम मात्र केहि सय आवेदन छ। दसौं हजार पहिले नै व्यक्त एप्पल र एन्ड्रोइड लागि आवेदन संख्या गर्दा। चाखलाग्दो कुरा, हिमाचल प्रदेश टोड ब्राडली को वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष (टोड ब्राडली) एक पटक कम्पनी पाम को राष्ट्रपति थिए। हिमाचल प्रदेश मा उहाँले 2005 मा बाँकी। उहाँले सफलतापूर्वक दुई कम्पनीहरु को विलय पूरा विश्वास छ।